fun – Healthy Life Journal
အမြင်ပွင့်သွားပြီ . . .
မိန်းမနဲ့ လမ်းခွဲဖို့ စီစဉ်နေသူကို သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက ဖျောင်းဖျပေးနေလေသည်။ “မင်းပြောတော့ သူနဲ့သာဆို ဘယ်လောက်အခက်အခဲတွေဖြစ်ဖြစ် ရင်ဆိုင်မှာပဲဆို” “စိတ်ညစ်ရလွန်းလို့ပါကွာ” “သူနဲ့မယူခင်က သေချာစဉ်းစားပါဆိုတုန်းက မင်းပဲ အချစ်မှာ မျက်စိမပါဘူးဆို” “အချစ်မှာမျက်စိမပါဘူးဆိုပေမယ့် မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတာနဲ့ အမြင်တွေပွင့်သွားလို့ပေါ့ကွာ” (Healthy Life ဂျာနယ်မှ စီစဉ်တင်ဆက်သည့်...
သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ ကိုကိုမို့ပါ . . .
“ကိုကို . . ချစ်မှာလိုက်တဲ့ ချောကလက်ပါလားဟင်” “အေးကွာ.. ဒီနေ့ အလုပ်ပင်ပန်းတာနဲ့ မ၀ယ်လာမိဘူး” နောက်တစ်နေ့ . . . “ကိုကို . . ဒီနေ့ရော ချောကလက်ပါလားဟင်” “အေးကွာ ဒီနေ့လည်း နောက်ကျတာနဲ့ မ၀ယ်လာမိဘူး”...
အလိုမလိုက်တော့ဘူး . . .
“ ဟေ့ကောင် . . မင်းတို့ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ အမြဲတမ်းမုန့်တွေအပြည့်ရှိနေတာ အခုဘာမှ မရှိတော့ပါလားကွ” “ အေး . . ငါ့မိန်းမက ဒီလကစပြီး အသင့်စားစရာတွေနဲ့ မုန့်တွေကို လုံးဝ မ၀ယ်ပေးတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီတဲ့ကွ” “ တယ်ဟုတ်ပါလား...
ပြောတတ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ . . .
ပင်ပန်းနေတဲ့ မိန်းမက အေးအေးလူလူ သက်သောင့်သက်သာနေတတ်တဲ့ ယောက်ျားကို စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ ပြောတယ်။ “တစ်နေ့လုံး ကျွန်မ အိမ်အလုပ်တွေ လုပ်ရတယ်၊ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ချက်ပြုတ်ဆေးကြောရတယ်၊ ကလေးတွေ ထိန်းရတယ်၊ ကလေးတွေ ဝေယျာဝစ္စလုပ်ရတယ်၊ အ၀တ်တွေလျှော် ဖွပ်မီးပူတိုက်ရတယ်။ ရှင် ဘာလုပ်သလဲပြော၊ ရှင်...
ရှိနေသေးတာပဲဟာ . . .
အဘိုးအိုတစ်ယောက်ရဲ့ ဦးခေါင်းမှာ ဆံပင်ရှစ်ချောင်းပဲရှိပါတယ်။ သူက ဆံသဆိုင်ထဲ ၀င်လာတော့ ဆံသဆရာက မေးတယ်။ “အဘိုး ဆံပင်တွေကို ရေပေးရမလား ဒါမှမဟုတ် အကုန်ညှပ်ချလိုက်ရမှာလား” အဘိုးအိုက ပြုံးပြီး ဖြေတယ်။ “အရောင်ဆိုးပေးစမ်း” (Healthy Life ဂျာနယ်မှ စီစဉ်တင်ဆက်သည့် အပတ်စဉ်...
အကောင်းဆုံးဆေး. . .
လူနာတစ်ယောက် နေမကောင်းသဖြင့် ဒေါက်တာရမ်းကုဆီ ရောက်လာသည်။ “ဆရာ . . ကျွန်တော် နေမကောင်းလို့ ဆေးထိုးပေးပါဆရာ” ဒေါက်တာရမ်းကုက အကူနှစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီး လူနာကို အတင်းချုပ်လိုက်ရာ လူနာက ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ မေးသည်။ “ဘာလုပ်မလို့လဲ ဆရာ” “ကျွန်တော့်ဆီမှာဆေးကုန်နေလို့ ခင်ဗျားကို...
စေတနာနဲ့ပါ . . .
လူကြီးတစ်ယောက် မုန့်ဆိုင်ထဲဝင်လာပြီး စားပွဲထိုးကောင်လေးကို ဟမ်ဘာဂါတစ်လုံးနဲ့ အအေးမှာပြီး ထိုင်စောင့်နေသည်။ စားပွဲထိုးကောင်လေး မုန့်တွေလာချချိန်မှာ- “ ဟာ . . ဟိတ်ကောင်လေး၊ မင်းက ငါစားမယ့် ဟမ်ဘာဂါကို ဘာလို့ လက်ကြီးနဲ့ ဖိပြီးယူလာတာလဲ.. မင်းလက်က ပန်းကန်တွေသိမ်းလိုက်၊ စားပွဲတွေသုတ်လိုက်နဲ့...
မလုပ်တာကို မေးနေသေးတယ် . . .
ဆရာဝန်က လူနာကိုမေးနေသည်။ “ ခင်ဗျား အားကစားလုပ်လား” “ ရုံးသွားရုံးပြန် လမ်းလျှောက်တာကို ထည့်တွက်လို့ရလား ဆရာ” “ ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်” “ အိမ်မှာ ပစ္စည်းအလေးအပင်တွေ သယ်မရွှေ့ရတာရော ထည့်တွက်လို့ရလား ဆရာ” “ ဒါတွေကလည်း ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားတာတွေပဲ...